Somaliya oo markale yeelaysa ciidanka badbaadada badda: SAWIRO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Somaliya oo markale yeelaysa ciidanka badbaadada badda: SAWIRO
Somaliya ayaa tababar u furtey ciidan loogu talogalay dadka ku hafta biyaha badda inay soo badbaadiyaan. Tababarkan ayaa ku kooban Muqfidho iyo garoonka diyaaradaha waxase la rajaynayaa in gobolada dalka lagu faafiyo. Somaliya ayaa hore u lahaan jirtey ciidan sidana laakiin raacay burburka.
Maxamed Cabdiwahaab hogaaminayay kooxda loo diyaariyay badbaadinta dadka ku hafta biyaha haddii ahadii ay dhacdo lama filaan ah qabsato ayaa sheegay in ay haystaan xirfad iyo tababaro ku filan oo ay ku gudan karaan waajibaadka loo igmaday, wuxuuna xusay in ay diyaar u yihiin in ay bulshadooda u adeegaan.
Sareeya Gaas Bashiir Cabdi Maxamed Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo goob joog ahaa ayaa la wareegay dhul loogu talogalay in xarun looga dhiso Ciidanka Ilaalada xeebaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa ilaalada xeebta garoonka, wuxuuna taliyuhu muujiyay in ay diyaar u yihiin sidii ciidankaasi ay u qabsan lahaayeen waajibaadkooda.
Wasiirka gadiidka iyo Duulista hawada Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa sheegay in ciidanka ay qeyb ka yihiin Hormarinta Garoonka, islamarkaana amnigiisa uu noqon doono mid meeshii laga rabay gaara.